| | မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ Facebook စာမျက်နှာ http://www.facebook.com/mpfpage
bugging November 2, 2012 - 7:35 pm အွန်လိုင်း ကနေ ညှစ်တော့ မယ်ပေါ့ 
Reply ဟန်တင့် November 2, 2012 - 9:15 pm စစ်မှန်တဲ့မီဒီယာရယ်လို့…”မြန်မာပြည်မှာ ဧရာဝတီပါပဲ”…မမှန်တဲ့သူတွေကတော့ ဘယ်ကြိုက်ပါ့မလဲ…..ဒါကတော့ ထုံးစံပါပဲ…”ကြိုဆိုပါသည် ဧရာဝတီ”…. ခွေးတွေတွေအများကြီးကြားထဲရောက်လို့ ၀ိုင်းဟောင်ကြတာဟာ မထူးဆန်းပါဘူး….
Reply aaa November 2, 2012 - 9:42 pm ကောင်းတာပေါ့။နောက်ဆိုရင် ဖေ့စ်ဘွတ်ကနေတဆင့် မက်ဆေ့ခ်ျ နဲ့ဈေးညှိလို့ပိုကောင်းသွားတာပေါ့။ အဲလေ…ဟုတ်ပေါင်…ဖေ့စ်ဘွတ်ကနေတဆင့် မက်ဆေ့ခ်ျ နဲ့အမှုဖွင့်နိုင်တာပေါ့..လို့ပြောမလို့ပါ။
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ November 3, 2012 - 2:16 am မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ အနေဖြင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ တရားခံများနှင့် ပတ်သက်၍ စာရင်းချုပ်ပြုစုရာတွင် လူမျိုး၊ ဘာသာကို အခြေခံပြုစုခြင်းမရှိကြောင်း၊ အမှုကြီး/ငယ် အမျိုးအစား၊ ပညာတတ်ခြင်း၊ မတတ်ခြင်းနှင့် ပြစ်မှုဖြစ်ပွားရခြင်း၏ အကြောင်းအရင်းများ ကိုသာ အခြေတည်၍ စာရင်းပြုစုသည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
Reply sky November 3, 2012 - 10:54 am facebook ပေါ်ကနေပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးမယ့်သောက်ရူးတပ်ဖွဲ့ရောက်လာပြီလား။ ဆဲမိတဲ့သူရဲ့account ကတော့မွှေခံရပြီ သာ မှတ်။
Reply Kopyichit November 3, 2012 - 8:20 pm we want real people’s police. Require real People’s police for democracy .
Reply tazan November 7, 2012 - 2:34 pm ရဲလက်စွဲ အတွဲ (၂) နဲ့အညီ နေထိုင် ကျင့်ကြံနိုင်ကြပါစေ။
Reply ye lay January 24, 2013 - 4:41 pm ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ ဒီလိုလုပ်ဆောင်မှုတွေရှိလာတာ တိုးတက်လာတယ်လိုယူဆပါတယ် နိူင်ငံတကာနဲရင်ပေါင်တန်းနိူင်တဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ကြီးဖြစ်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်